Bogga Ciyaaraha, 05 June 2019
Ajax oo Hanatay Horyaalka Holland
Kooxda Ajax Amsterdam ayaa xalay ku guuleysatay horyaalka dalka Holland, kaddib marki ciyaarteedi ugu danbeysay xilli ciyaareedkan ay ku soo xirtay 4-1 oo ay ku garaacday De Graafschap.
Lazio oo qaadday Coppa Italia
Dalka Talyaniga, waxaa xalay lasoo gaba gabeeyay tartanka Coppa Italia oo ay ku tartameen ciyaarti kama danbeysta aheyd kooxaha Lazio iyo Atalanta.
Manchester City oo ku guuleysatay horyaalka EPL
Ajax oo Qarka u Saaran Hanashada Horyaalka
Kooxda Ajax ayaa qarka u saaran in ay hanato horyaalka dalka Holland kaddib marki ay shalay 4-1 ku garaacday kooxda Utrecht. Halka kooxda kusoo xigta ee PSV ay 1-0 ku khasaartay AZ Alkamaar.
Bayern Munich oo La Hakiyay
Kooxda Bayern Munich ayaa Sabtidi iska khasaarisay fursad ay ugu dabaaldagi laheyd hanashada horyaalka Bundesliga, kaddib marki ay barbarro goolal la’aan ah ku kala baxeen kooxda RasenBallsport Leipzig halka kooxda kusoo xigta ee Borussia Dortmund ay 3-2 ku khaarijisay Fortuna Düsseldorf.
Ribery oo ka tagaya Bayern
Laacibka garabka uga ciyaara kooxda Bayern Munich Franck Ribery ayaa lagu dhawaaqay inuu ka tagi doono naadiga marka la gaaro bisha soo socota ee June.
Barcelona oo garaacday Liverpool
Kooxda Barcelona ayaa hal lug la gashay finalka Koobka Kooxaha Horyaalada Yurub ee Uefa Champions League, kadib marki ay xalay 3-0 ku khaarijisay Liverpool.